छोराछोरी समेत भैसकेकि श्रीमति जेल परेको सुन्दा कल्पनाका श्रीमान खुसि हुदै खोले यस्तो रहस्य! (भिडियो सहित) – live 60media
छोराछोरी समेत भैसकेकि श्रीमति जेल परेको सुन्दा कल्पनाका श्रीमान खुसि हुदै खोले यस्तो रहस्य! (भिडियो सहित)
कल्पनाको माइती पक्ष र अरुले पनि छोराछोरीको भविष्यको बारेमा प्रश्न उठेपछि अब आफुले छोराछोरी ल्याउने बताएका छन् । विवाह गरेर गएकी छोरी पनि आफ्नो भाईलाई स्याहार सुसार गर्नु भनेर भन्न आएको पनि बताएका छन् । ‘विवाह गरेर गएपछि छोरी आएकै थिइनन्, तर आज छोरी पनि घर आएर भाईको रो’एर बेहाल छ भाईलाई हेर्नुपर्यो ‘ भनेर गएको बताएका छन् । उनले आफ्ना छोराछोरीको जिम्मा आफुले लिने बताएका छन् ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****
← दु’र्घटनामा परी क्यानडामा ३ वर्षीय नेपाली बालकको दु:खद नि’धन, बुवा र ७ वर्षिय दिदी घा’इते
डा’न्स ग’र्ने बा’हाना’मा यस्तो छा’डा ह’र्कत गर्दा य’स्तो हालत भिडीयो भयो भाइरल -भिडीयो हेर्नुस →